BBC Burmese - အစီအစဉ်များ - အားကစားနဲ့ စကားသင် (အမှတ် ၂)
နောက်ဆုံး ရေးသားချိန်2သြဂုတ်လ 2011 - 16:38 GMT
အခုအပတ် ဒုတိယပိုင်း သင်္ခန်းစာမှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှား စရာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေကို လေ့လာကြည့်မှာပါ။
စာသားနဲ့ ကြည့်ချင် ရင်
Clip subtitled with I'm so excited and I can't wait bolded
လျိုဒင်းက သူစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာ ပြသဖို့ စကားစု နှစ်မျိုး သုံးသွားပါတယ်။
I'm so excited ဆိုတာက သိတ်စိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်လို့ ပြောတာပါ။
I can't wait ဆိုတာကတော့ စောင့်တောင် မစောင့်နိုင်တော့ဘူးလို့ ပြောတာပါ။
–ed နဲ့ –ing သုံး နာမဝိသေသန များ
Now complete the sentences with the correct form of the adjective.
နှိုင်းယှဉ် နာမ ဝိသေသနများ
Now complete the sentences with the correct form of the comparative adjective.
a) –ed and –ing adjectives